विनोद न्यौपाने | Ratopati
जनादेश नामको अतिवादलाई यसकारण परमादेश ! access_timeसाउन ५, २०७८
केपी ओलीको सिंहदरबार प्रवेश सुखद् भए पनि बहिर्गमन भने लज्जास्पद भएको छ । इतिहासमा बिरलै मात्रले पाउने अवसर पाएर पनि ओलीले त्यसलाई थाम्न सकेनन् । ओली बहिर्गमनमा बाहिर दलीय राजनीतिको कुसंस्कार कारकजस्तो देखिए पनि यथार्थमा कानुनभन्दा आफूलाई माथि देख्ने अहंकार, क्रोनि क्या...
काँग्रेस सच्चिने कि सकिने ? access_timeअसार २०, २०७८
इतिहासमा नेपाली काँग्रेसको स्थान सम्मानजनक छ । अघिल्लो पुस्ताले प्रजातन्त्र स्थापनार्थ भोगेको कठोर यातना, निष्ठापूर्ण बलिदान र दृष्टिकोणसहितको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वकै कारण त्यो स्थान बनेको हो । इतिहासको सम्मान नहुँदा पनि त्यसको ब्याजले मात्र काँग्रेसलाई पछिल्लो ३० ...